Afrika Atsimo : Ity no “Joule”, Fiara Afrikàna Voalohany Mandeha Amin’ny Herinaratra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Aogositra 2018 6:48 GMT
Isan'ireo voalohany nampahafantatra ilay fiara afrikàna voalohany mandeha amin'ny herinaratra vita tao Afrika Atsimo ny bilaogera. Ao amin'ny bilaogy Urbasprout, napetrak'i Glen ety anaty tambajotra ireo saripika ahitàna ilay fiara sy ny torohay rehetra momba ny mpamokatra azy, ny nanome ny endriny ary ireo daty voaomana hamarotana azy (mitondra ho aminà tranonkala miteny anglisy daholo ny rohy rehetra).
Ny faharetan'ny vatoaratra mandefa azy no olana goavana amin'ireo fiara mandeha amin'ny herinaratra, saingy toa azo ambara fa hiova izany. Ny “Joule” dia hisy vatoaratra roa mampiasa ny Lithium izay miantoka ny faharetany hahavita 400 km. Ora fito eo no faharetan'ny famahanana azy, araka izany, alina iray manontolo. Ny fanindriana hisatra dia mandray anjara ihany koa amin'ny famahanana ny vatoaratra amin'ny fanangonana ireo angovo ateraky ny fanitsahana hisatra (mivadika ho mpamokatra angovo).
Avy eny amin'ny toerana famokarana ilay fiara, manampy izy hoe :
Efa niomanana ny hoe 50 isanjato amin'ireo akora hanamboarana ny Joule dia hovokarina eo an-toerana ihany ary ho atomboka hamidy izy amin'ny 2010, amin'ny sanda 200 000 Rands (eo amin'ny 17 000 €). Azo eritreretina ny ho famokarana azy ao Gauteng, fa koa any Durban sy ao Cap
Omen'i Laura ao amin'ny bilaogy Treevolution ny rohy mankany amin'ny tantaran'ny “IOL” , ary tanisainy ny famaritana nataon'i Edwin Naidu :
Fiara misy toerana enina izy io izay mitovitovy amin'ny fampivadiana ny Renault Scenic sy ny Citroën Picasso.
Mampiomana izy hoe mila miandry kely ireo mpanjifa [ao Afrika Atsimo] vao hahita azy io, mbola aranty ao amin'ny “Salon de l'Auto” any Parisy mantsy ilay izy amin'izao fotoana izao. [Oktobra 2008]
Carl avy amin'ny Greencars.za.net no manome torohay hafa momba ny “Joule”, ary mamaly ireo fanontaniana lehibe momba ny famatsiana herinaratra ho an'ireo fiara mandeha herinaratra ao Afrika Atsimo ireo.
Fanadihadiana iray nataon'ny Eskom, ilay mpamatsy herinaratra manana ny ampihimamba ao Afrika Atsimo, no nanamafy fa ny tambajotra afrikàna tatsimo dia manana ny fahafahana hamatsy vala-nà fiarakodia an-tapitrisany mandeha amin'ny herinaratra, tsy hanohintohina velively ireo efa mpanjifany hafa na hilàna manangana fotodrafitrasa fanampiny. Manana amby ampy ny Eskom raha herinaratra eo anelanelan'ny amin'ny iraikambinifolo ora alina sy amin'ny enina ora maraina. Maharakotra tsara ny ampahan'ora ilaina hanovana fahana izany. Tsy mila afa-tsy 20 isanjato amin'ny angovo lanin'ny fiara mahazatra ireo fiara mandeha amin'ny herinaratra. Midika izany fa ho kely kokoa ny entona avoaka, na dia tambajotranà foibe ahodina amin'ny arintany aza no tena ampiasain'ny Eskom hamokarany herinaratra. Miaraka amin'ny fironana ho any amin'ny fitantanana angovo madio kokoa, ny fitambaran'ny famoahana entona manontolo tondroina ho avy amin'ireo fiara mandeha amin'ny herinaratra dia hitohy hidina hatrany.
Omeny ihany koa ireo torohay momba ny vatoaratra ampiasain'ireo fiara, ny rafitra momba ny hisatra, ny ‘chassis’, ny solosaina fibaikoana ao anatiny, ireo zavabitany ary ny ‘suspension’.
Fampahatsiahivana ho an'ny mpamaky no omen'i Rory ao amin'ny Carbon smart hoe mbola mila atao anaty kajikajy hatrany ireo sakana izay “namono ny fiara mandeha herinaratra ampolotaona maro lasa izay”. Manontany tena izy hoe ho tody hatraiza ity fandraisana andraikitra niainga teo an-toerana ity . Tanisainy ny lahatsoratra iray tao amin'ny gazetiboky Wired momba ny lasitra famarotana ireo fiara mandeha amin'ny herinaratra, nosoratan'i Shai Agassi. Soritan'i Rory fa io lasitra io dia mifantoka amin'ny olan'ny fitahirizana ny angovo, izay lasa hisatra amin'ny fanekena ireo fiara mandeha amin'ny herinaratra.
Ny fitahirizana ny angovo no tena olana be ara-teknika no sady iray mibahana ny fanekena ireo fiara mandeha amin'ny herinaratra, manomboka amin'ny lanjan'ny vatoaratra, ny fotoana famahanana azy. Io olana io no ilain'ilay lasitra famarotana vahàna. Ny tena atiny dia mety azo atao ny manangana orinasa hivarotra ny herinaratra, miara-dàlana amin'ny fivarotana ny fiara. Hanao fifanarahana ianareo izay hahafahanareo mamahana ny fiara eny amin'ny toerana iray anaty tambajotranà mpamatsy herinaratra, na hamahana fotsiny ilay vatoaratra. Ho fananan'ilay orinasa mpamatsy herinaratra ny vatoaratra, ka raha mila manohy ny dianao ianao ao anatin'iny andro iray iny, hanafoana ny fotoana lany hamahanana vatoaratra ny fanakalozana izany fotsiny. Foana araka izany ny filànao manana maotera fanampiny lafo vidy mandeha amin'ny solika. Raha tsy toerana lavitra no halehanao, tsy ilainao ny mitondra vatoaratra betsaka, ary dia mahazo tombony amin'ny resaka lanja ianao. Na ny fiara aza afaka ampindramina maimaimpoana an'ireo mpamily izay manatanteraka fivezivezena betsaka, ary ny hafa mety hividy ilay fiara sy hividy herinaratra mifanaraka amin'izay filàny. Mampahatsiahy zavatra anareo ve izany? Eny, io no lasitra ara-toekarena ampiasain'ny telefona finday.